UMGANGATHO WEZITENA (UYILO KUNYE NESIKHOKELO SOKUTHENGA) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Umgangatho wezitena (Uyilo kunye nesikhokelo sokuthenga)
Umgangatho wezitena (Uyilo kunye nesikhokelo sokuthenga)
Nalu uyilo lwethu lwezitena kunye nesikhokelo sokuthenga kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zekhaya lakho.
Isitena yinto yakudala eyaqala ekuqaleni kwempucuko. Nangona kunjalo, izitena zisetyenziselwa izinto ezininzi kuyilo nakwakhiwa. Umgangatho wezitena yenye yeendlela ezithile zokusebenzisa izitena kwinkqubo yokwakha. Sebenzisa izitena zizuze njengelifa isiphumo esikhethekileyo sombala kunye nombala ofana noyilo lwangaphakathi lwe-rustic emsulwa. Ixesha elongezelelekileyo nangona olu hlobo lophahla luthanda ukunxiba, longeza kuphela kwiimvakalelo ezikhethekileyo zemoya.
Kule mihla, ukutyibilika kwezitena kuthambekele ekubeni kungaphelelwanga kwizinto zangaphakathi zakudala kodwa nakwizithuba zangoku. Kuba akukho zitena zimbini ziyafana ngokupheleleyo, izitena zinokunika uyilo uninzi lweempawu. Kukho iintlobo ngeentlobo zemibala kunye nemibala onokuyikhetha ekuvumeleni umntu ukuba athelekise imibala yemibala abayifunayo.
Indibaniselwano yentsimbi, iglasi, ukhuni kunye nomgangatho wezitena ochanekileyo kunye nococekileyo wejiyometri ubuyisela imeko-bume yanamhlanje. Umgangatho wezitena unokupholishwa okanye utywinwe ukunika umdla. Olu hlobo lophahla luthwala iindlela ezininzi zamalungiselelo afana neherringbone, ibhaskiti yokuluka ivumela inkululeko yokudlala ngeethayile zemibala okanye izinto ezenziwe ngokwesiko njengoko unqwenela.
ukuvimba amagumbi ehotele kwimitshato
Ukuba ukhe uthandabuze amaxabiso ezinto zokwakha izitena, qaphela ukuba ayisiyiyo impahla ephezulu eya kuthi icoce ipokotho yakho ekupheleni kwenkqubo yokwakha. Umgangatho ohleliweyo wezitena ngenyawo lesikwere uxabisa malunga ne- $ 5- $ 10, efikeleleka kakuhle.
Iindidi zeBrick Flooring
Umgangatho weBrick Brick
Izitena zeBrick kuMgangatho wangaphakathi
Isitena sangaphakathi seBrick
Umgangatho weTayile yeZitena
Brick Laminate Umgangatho
Umgangatho weBrick Herringbone
Umgangatho wezitena ekhitshini
Ukufakwa kwezitena zeBrick
Ividiyo kufakelo lweBrick Paver
Uhlobo lwezitena olusetyenziselwa ukwakha udonga ekhaya lwakhiwe ngokwahlukileyo kunesitena esisetyenziselwa ukutyabeka. Izitena zamatye ezisetyenziswa kakhulu kulwakhiwo lweendonga ekhaya zibizwa ngokuba zizitena ezikhutshiweyo. Ezi zitena zodonga zinemingxunya ebaleka kuzo ukuze ibambane ngcono xa isetyenziswa ngokudibeneyo nodaka nesamente. Izitena ezandisiweyo azisetyenziswanga kwizicelo zomgangatho.
Kwelinye icala, izitena ezisetyenziselwa ukutyibilika zomelele ngokupheleleyo ngaphandle kwemingxunya ebenza ukuba bomelele ngakumbi kwaye bakwazi ukumelana noxinzelelo lokuhamba kweenyawo. Ubunzima bomthwalo butyebile isitena ekufuneka sikhona.
Umzekelo izitena zangaphakathi ziqhelekile ukuba ngu-1/4 ″ ukuya ku-1/4/4 thickness ubukhulu kuba ziya kufuna kuphela ukumelana nokuhamba kweenyawo okuqhelekileyo. Kwindlela yokuqhuba okanye ngaphandle kwendlela izitena ziya kufuna ukujija ukumelana noxinzelelo olongezelelekileyo. Umgangatho wangaphandle wezitena osetyenziselwa indawo yokuhlala umntu kufuneka ubengu 2 1/4 ″ ukuya ku 2 3/8 ″ ubukhulu, ngelixa useto olunzima lokusetyenziswa kwemizi mveliso kufuneka lube yi-1/8 ″ ubukhulu.
Zimbini iintlobo eziphambili zezitena ezisetyenziselwa ukutyibilika kumgangatho wezitena okanye imigangatho yezitena.
Ukujonga okuqhelekileyo kwezitena kwendalo kwahlukile kwinkangeleko kunye nokuziva. Nangona kunjalo, i-veneer yezitena iyakwazi ukuphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe.
I-Brick veneer icekeceke kakhulu kunobungakanani bezitena obuqhelekileyo, obunako ukongeza ubume kunye nokufudumala kanye njengokuba ilitye lezitena lendalo lisenza. Isitena seBrick bubunzima obulula kwaye sinokulingana kumanqanaba omgangatho amatye endalo angenakufakwa kuwo.
Iimpawu zezitena zizama ukulinganisa imvakalelo yokwenyani yokusebenzisa ilitye lendalo lezitena. Ukuqina kwezitena okuzinzileyo nako kunokutshintshwa ngokulula. Ukuphucula umgangatho, i-veneer yezitena iyakwazi ukuphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenzeke, i-rustic okanye i-design eclectic design.
yimalini ekufuneka uyisebenzise kwindandatho yokuzibandakanya
Izitena zokubhabha zilinganisa imigangatho yezitena yokwenyani ngaphandle kokufaka ibhloko epheleleyo. Izitena zeebrick ziza ngobukhulu obuqhelekileyo obu malunga ne-0.5 ubukhulu kunye nongqameko oluphezulu.
Izitena zetena ziyafumaneka kwintengiso yemibala eyahlukeneyo yokuxuba nokudibanisa, ngokufanelekileyo. Ukuqinisekiswa kokuhlala ixesha elide, ukugcinwa okuphantsi kunye nokuziva okwenyaniweyo zimbalwa zezibonelelo ezibandakanyiweyo kwiphakheji.
Enye yezona zinto zidibeneyo kukuba izitena ezinokuba zizitena zinokuba nzima kakhulu kwiinyawo ezingenanto ngaphakathi ngaphakathi zijonga iimpawu zento leyo.
Nokuba kungumgangatho wokwenza izitena, izitena zokubamba izitena, ukutyabeka ngezitena okanye udongwe; ubuninzi bezinto onokukhetha kuzo ziyafumaneka ngobulumko bobuhle, ngokwemibala kunye nee-shades ukuze zilungele iindawo ezahlukeneyo ekhayeni lakho.
Imigangatho yezitena zizinto ezizinzileyo, ezenziwe ikakhulu kwizinto zendalo. Kwesinye isitena esidala esinemigangatho sikwakhangeleka singcono ngokuhamba kwexesha. Ukongeza ubuhle obumsulwa kunye nokufudumeza umgudu obekwe kulondolozo kuphantsi kakhulu.
Umgangatho wezitena ofakelwe ngaphakathi wenza imvakalelo yokuhamba ngeepateni eziphindaphindayo ezifakwe ngocwangco. Injongo yobuhle yokuba uyifake isebenza ngokufanayo kwiinjongo zokusebenza ngokunjalo. Umzekelo, ukuba ithayile yangaphakathi yezitena yonakele akukho mfuneko yokutshintsha yonke i-flooring kodwa endaweni yoko yithayile eyonakeleyo. Ngaphakathi izitena zangaphantsi zinakho ukuthwala uxinzelelo kwaye zinokuthatha umthwalo ophakame kakhulu.
Le patio egutyungelweyo enekhitshi elingaphandle inomgangatho wezitena kunye neendonga zezitena zokutshatisa uyilo lwasekhaya.
Phakathi kwezinto ezininzi ezenziwe ngomgangatho wezitena kuza ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo ezifumaneka ngokulula kwimarike. Iipateni zoyilo zihlala zahlukile ekunikezeleni ngeendlela ezahlukeneyo zokudibanisa kunye nokulungiswa.
Iithayile zomgangatho wezitena zinokufakwa kwiindawo ezahlukeneyo, nokuba ngaphakathi okanye ngaphandle. Umzekelo, iithayile zomgangatho wezitena zinokufakwa kwiindlela zokuhamba zangaphandle zokuziva okwenyani okanye ukufezekisa ukujonga okungaphezulu. Eyona nto inomdla ngakumbi kukuba iipateni ezahlukeneyo zethayile zinokudityaniswa kunye ukuze zilungelelaniswe kodwa zenze umdla kumgangatho.
Iithayile zomgangatho wezitena zahlukile kwindlela yokwakha, inkqubo, kunye neendidi zeepateni ezishiya abathengi benendlela ezahlukeneyo zokhetho ekukhetheni iimfuno zangaphakathi nangaphandle.
Umahluko phakathi kokuphosa kunye ne-ms
I-Faux izitena zetena emgangathweni zilinganisa ubunyani bokwenene. Kuthathwa njengokugxininisa kwitena lendalo ngaphandle kokusebenzisa ithayile yendalo.
Kuqinisekisiwe ukusetyenziswa kwexesha elide, i-faux tile tile eyenziwe ngomthi yenziwe nge-porcelain. Iithayile zesitena zentsimbi zisetyenziselwa iinjongo ezininzi kuyilo kunye noyilo olubonelela ngokulula kofakelo ngokwakhiwa.
Ukulungelelaniswa ngokugqibeleleyo kweethayile zezitena kunye nokwehliswa kweendleko zabasebenzi zizizathu ezimbalwa zokuthambisa iithayile zetena kwindawo ephambili. Ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho zemibala, uburhabaxa, ubungakanani bezitena zefeksi ziluncedo kwiindawo ezenzelwe wena ezifuna ingqalelo eyongezelelweyo ngokweenkcukacha.
Isitayile esihle esijongwa njengezitena okanye umgangatho weteyile yomgangatho ngokukodwa usebenza kakuhle kuyo nayiphi na indawo endlwini yakho. Umgangatho we-tile wezitena awusafani ngokwahlukileyo kwiitayile zokwenene zezitena ezizisa ubuhle kunye nobushushu kwindlu yakho.
iingoma zokungena komtshakazi kumsitho
Umgangatho olaminethiweyo wakhiwe ngomthi oxiniweyo kwaye ukhululeke ngakumbi ezinyaweni kunezitena. I-laminate yezitena ikunika ukubonakala kwesitena sokwenene ngaphandle kweendleko kunye nobunzima bokuhlala ucocekile. Ngaphandle kwento yokuba i-laminate, i-laminate flooring iqhubele phambili ngokwaneleyo ukufezekisa ukuziva konke kunye nomoya okanye isitena ngexabiso eliphantsi.
Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo kunye ne-shades, i-laminate flooring yomgangatho inokuba ngumxube kunye nokudibanisa nezinye izinto ezingaphakathi endlwini yakho. Ilungele iinjongo zorhwebo okanye iindawo apho ukugcwala kweenyawo ezinzima kubakho, ukutyibilika kwezitena kumgangatho ofanelekileyo kuluncedo kuninzi lwezinto zokusebenza umntu anokuzilindela kumgangatho ophezulu wezithuthi.
Kubekwe ngokufanelekileyo ukudibanisa ne-shades yoyilo lwangaphakathi, iithayile zomgangatho wezitena zinokucwangciswa ukuze zilingane neepateni ezinqwenelekayo. Ngolondolozo olusezantsi kunemigangatho yezitena rhoqo, ukutshayela okanye ukubetha rhoqo kuya kwenza ngokwaneleyo ukubonelela ngokucoca ngokucokisekileyo. Kubalulekile ukuba wazi iindidi zomgangatho wezitena emgangathweni ukuze ulungelelanise iimfuno kunye nemveliso efanelekileyo. Umgangatho olaminethiweyo uhlala uvela kwiminyaka eli-15 ukuya kweli-25 ukusukela kwixesha lofakelo.
IHeringbone ngumzekelo nje wentlanzi. Iithayile zomgangatho wezitena zinokubekwa ngokuhambelana nephethini engqondweni yokufaka i-vibe enesitayile ngakumbi eya kulungela umgangatho wangaphakathi wangoku.
Umzekelo unokufezekiswa ngokusebenzisa iintlobo zezitena, nokuba zezitena ezenziwe ngodongwe. Iphethini idlulisela imeko yenguquko kunye namandla ngokungafaniyo noogxa bayo. Ipateni eyahlukileyo yezitena idala imvakalelo engapheliyo ngaphakathi.
Ipateni yesherringbone inika umsebenzisi ukuba adlale kunye nephethini eyenza i-vibe enobugcisa ngaphakathi ngaphakathi. Ilungele imigangatho yegumbi lokuhlambela okanye ukungena kwamangenelo aphambili, okanye indawo yokulinda ukonwabisa iindwendwe, ipateni yeherringbone konke malunga nesakhiwo esilukiweyo.
Le yadi imema ngasemva ipatio kunye nomgangatho wezitena kwipateni yeherringbone.
Isitena yinto efudumeleyo, ehlala ixesha elide eyongeza ubuhle bayo nakweyiphi na ingaphakathi elijikelezileyo. Umgangatho wezitena uxhotyiswe ngombala onzima odinga uxinzelelo ngakumbi ukophula okanye ukonakalisa.
Nangona ukufakwa phantsi kwezitena ekhitshini kunokubonakala ngathi yingcinga efanelekileyo, kuyacetyiswa kakhulu ukuba ukhathazeke malunga nokuthwala okuthweleyo. Umzekelo, umphezulu ongena ngaphakathi ungena kulwelo oluphelela ekonakaliseni umgangatho ongaphantsi ongakhokelela ekukhuleni komngundo.
Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iarhente yokutywina ukugubungela umphezulu womgangatho njengesisombululo. Enye indlela kukusebenzisa iarhente yokuhambisa izitena njengetywina lomgangatho wethayile. Kukwakho iintlobo zethayile ekhitshini elinganisa ukubonakala kwezitena zokwenyani ezinokuba lolunye uhlobo.
Isitena siyakwazi ukuphinda sibuyele kwimvakalelo efudumeleyo, nentliziyo elungileyo ukuba ilungele ikhitshi. Esi sisicatshulwa esithandekayo kuyilo lwekhitshi xa liphathwa kakuhle kwaye linyanyekelwa. Bona eminye imifanekiso Uyilo lwekhitshi lezitena Apha.
ndiyavuyisana nomtshato wenu ozayo
Ukufakwa kwezitena zezitena kungaphezulu okanye kungaphantsi kufana kufakelo lweetayile oluphakathi oluyiprojekthi enkulu yeempelaveki ye-DIY. Izitena ezinokufakwa kwisitena okanye kwibhodi yekhonkrithi endaweni yoko. Ukujoyina iipaneli zethayile, kusetyenziswa igrout. I-Grout iya kujoyina izitena zezitena kwaye uyibeke ngendlela enocwangco kumgangatho wangaphakathi.
Kubalulekile ukutywina izitena zokubekwa kwezitena emva kwenkqubo yokufaka. Nje ukuba ifakwe, i-sealer elungileyo iya kukhusela ukutyibilika ngaphakathi ngaphakathi nakweyiphi na into engamanzi kunye nokunciphisa umonakalo xa sele usetyenzisiwe.
Ngenye igalari enxulumene noko ndwendwela iphepha lethu malunga udonga lwezitena amagumbi okuhlala .
Izipho zeminyaka engama-20 zamadoda
Umsesane wedayimani wokubandakanya amadoda